Sida Loo Abuuro Liisaska Suuqgeynta Emailka Ka Fiican Isticmaalka Baraha Bulshada | Martech Zone
Suuqgeynta iimaylku waxay ahayd hab caan ku ah suuqleyda inay ku gaaraan macaamiisha suurtagalka ah tan iyo korsigii baahsanaa ee dhexdhexaadka ahaa ee 1990-meeyadii. Xitaa iyada oo la abuurayo farsamooyin cusub sida warbaahinta bulshada, saamaynta, iyo suuqgeynta waxyaabaha ku jira, emaylka ayaa weli loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu wax ku oolka badan marka loo eego sahan oo ka mid ah 1,800 suuqleyda oo ay qabtaan Smart Insights iyo GetResponse.
Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan in iimaylka suuqgeynta hababka ugu fiican aysan ku soo kordhin tikniyoolajiyad cusub. Thanks to warbaahinta bulshada hadda waxaa jira siyaabo aad si weyn ugu hagaajin karto tayada liiska suuqgeynta emaylkaaga oo ka baxsan kaliya bogga xulashada bogga iyo iibsashada liisaska dhinac saddexaad.
Hoos waxaa ku yaal shan dariiqo oo aad ugu adeegsan karto warbaahinta bulshada si aad ugu hagaajiso tayada liiska hoggaanka emailkaaga aasaasiga illaa farsamooyinka casriga ah.
Ka Raac Kuwa Raacaya Barahaaga Bulshada Inay Ka Gudbaan Kanaallada
Habka ugu fudud ee loogu kaydsan karo liiskaaga e-mayl warbaahinta bulshada ayaa ah in lagu dhiirrigeliyo saaxiibbadaada warbaahinta bulshada, kuwa raacsan iyo kuwa isku xidha inay iska diiwaangeliyaan liiska emailkaaga. Midkani wuxuu umuuqan karaa mid iska cad, laakiin shirkado badan ayaan isku mashquulin raadinta iyo kaqeybgalinta hoggaankooda marinnada kala duwan.
Ha u maleynin in taageerayaashaada warbaahinta bulshada ay inta badan yihiin dad la mid ah kuwa ku jira liiska emaylkaaga. Sidoo kale, ha qorin qiimaha asxaabtaada warbaahinta bulshada maadaama ay kaa maqan tahay awood ay ku sameyso ama saameyn ku yeelato go'aanka iibka. Khibradeyda, midkoodna run ma ahan.
Abuur olole warbaahinta bulshada ah oo kuu horseedaya bogga saxiixa boggaaga. Waad layaabi laheyd inta tayo ee hogaamineysa ee aad iska qori karto adoo adeegsanaya baraha sida Twitter, Facebook iyo LinkedIn hadii aad si joogto ah uga qeyb gasho isticmaaleyaasha bulshada wada hadalada mowduucyada ah iyo waxyaabaha qiimaha leh ee lagu daray. Sida muhimka ah, haddii dadkani ay si joogto ah kaagala macaamilaan warbaahinta bulshada waxay aad ugu dhowdahay inay furaan oo akhriyaan emaylladaada.
Soo bandhig muuqaalka qarsoodiga ah ee qarsoon ee ay la socdaan dhageystayaasha Facebook
Iyadoo la adeegsanayo warbaahinta bulshada, liistada emaylka ee imminka kuguma xiriirinayso dadkaas gaarka ah. Waxay sidoo kale fureysaa barkad aad u ballaaran oo horseed u noqon kara dadka la midka ah ee isticmaalaya Facebook Muuqaalka Dhageysiga Macaamiisha.
Adeegsiga muuqaalka waa fududahay. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad soo dejiso ama aad nuqul ka sameysato oo aad ku dhejiso liistada cinwaankaaga emailka ah warqad-xisaabeed. Kadib ku yaree dhagaystayaashaada caadada ah astaamaha u qalmida ee khuseeya, sida da'da iyo xiisaha, una sheeg Facebook inay raadiso a fiirso dhagaystayaasha.
Facebook ayaa markaa daadin doonta keydkeeda macluumaadka si ay u hesho dad leh astaamo la mid ah kuwa hadda ku shaqeeya liiska emailkaaga. Abuur xayeysiis bartilmaameed ah oo ka dhaadhicin doona xubnaha dhagaystayaashaada muuqaalka ah inay gujiyaan oo ay aadaan bogga degitaanka ee boggaaga sida faallooyinka hore.
Adeegso Baraha Bulshada Si Aad U Hesho Cinwaanada Emailka
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalabka warbaahinta bulshada si aad u hesho cinwaanada emaylka shaqada ee hoggaamiyeyaasha adoo adeegsanaya farsamo fudud, laakiin inyar ka sii horumarsan, oo loo yaqaan 'data appending'.
Xogta ku lifaaqan suuqgeynta ayaa asal ahaan adeegsaneysa adeeg sadexaad si ay u buuxiso meelaha banaan (sida cinwaanka shaqada ama cinwaanka iimaylka shaqada) ee loogu talagalay hogaamiyaashaada 'macluumaadka xiriirka Shirkadaha qaar ee ku takhasusay aaggan, waxaa ka mid ah Sellhack, Clearbit iyo Pipl (halka aan ka shaqeeyo).
Tusaale ahaan, Raadinta Pipl, isticmaaleyaashu waxay soo rogi karaan liis ay ku jiraan magacyada hoggaamiyaasha iyo waxkaqabashada warbaahinta bulshada waxayna kala soo bixi karaan liiska cinwaanada emaylka maqan ee lagu daray.
Adeegyadan lifaaqa xogta waxaa loo isticmaali karaa hel cinwaanada emaylka raadadka suurtagalka ah ee laga helo dhageysiga bulshada. Si looga fogaado inaad noqoto spamer hubso inaad bixiso ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo ka-bixid ah markaad la xiriirto dadkan
Hubi Liiska Emailkaaga Ama Aan Laheyn Baraha Bulshada
Waa xaqiiqo nasiib darro ah suuqgeynta iimaylka in boqolley dad ah ay iska diiwaan gelin doonaan liiska emailkaaga adoo adeegsanaya cinwaanno emayl been abuur ah. Kaliya maahan email u dirida cinwaannadan waqtigaaga, laakiin emayllo badan oo boodboodaya ayaa ugu dambeyn horseedi doona bixiyaha adeegga emaylka inuu kuugu calaamadeeyo sheyga xannibo koontadaada.
Waxaad isticmaali kartaa tiro ka mid ah qiimaha tartanka u dir adeegyada xaqiijinta si loo tirtiro emayllada been abuurka ah, oo ay ka mid yihiin Marna ha noqon, BriteVerify, Email Xaqiijinta Jumlada, Email Ansixiyaha iyo Tayada Xogta Khibrada.
Had iyo jeer, dadku waxay isticmaali doonaan xisaabaadka emaylka shaqsiyeed ama cinwaan ay si joogto ah uga eegaan bixiyeyaasha sida Gmail iyo Yahoo oo buuxinaya foomka xiriirka. Tani waxay ka dhigeysaa la-xiriirka dadkaan iyo u-qalmitaanka waxay keenaysaa wax aad u dhib badan.
Nasiib wanaag, adeegyada sida Cinwaan Cusub iyo Xogta Tower ayaa kaa caawin doona inaad hesho cinwaanada emayllada ay doorbidaan macaamiisha iyo emayllada laga yaabo inay ka jawaabaan dalabku iyadoo lagu saleynayo dhibcaha dhibcaha.
Haddii kale, waxaad u isticmaali kartaa baraha bulshada iyo cinwaannada emaylka ee hore Xogta Dadka Pipl API si aad u hesho cinwaanno emayl kale oo shaqo ah. Xogta taariikhiga ah ee shaabadaysan ee diiwaanka emaylka waa inay ku siisaa fikrad haddii e-mayl la adeegsanayo iyo suuragalnimada cinwaan shaqo iyo macluumaad kale oo xirfadle ah si loo hoggaamiyo tayada.
Fure u ah go'aaminta mid ka mid ah seddexdan nooc ee adeegyada ah ee isbarbar dhigaya qiimahooda, heerarka isbarbar dhaca iyo sida tikniyoolajiyadooda ay ugu habboon tahay naqshadeynta iyo ujeeddada liiska hoggaankaaga.
Faa'iidada Tartan fudud
Qaadashada ugu weyn ayaa ah inay mudan tahay in hal-abuur la adeegsado iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad cusub si kor loogu qaado tayada liisaska suuqgeynta iimaylkaaga iyo heerarka wadahadalkooda. Raadin kale oo laga helay baaritaankaas 2015 Smart Insights wuxuu ahaa in kaliya aqlabiyad yar (53%) ee suuqleyda ay isticmaaleen leedhka iyo liistada qalabka dhismaha si loo hagaajiyo baaxadda iyo waxtarka gaadhitaanka hoggaankooda. In badan oo suuqleyda ah (in ka yar 25%) waxay adeegsadaan istiraatiijiyad bulsheed ama nuxur si ay u dhisaan hoggaan tayo leh. Sii naftaada faa'iido tartan ah. Qaadashada tallaabadaas dheer waxay noqon kartaa wax fudud.
Tags: BriteVerifyemail ansax badanxisaabaadka emailkaemail ansax ahxaqiijinta emaylkatayada xogta tijaabada ahcinwaan cusubdhuumahaxogta pipl apiwarbaahinta bulshadaxogta munaaradda
Ronen waa wacdiye badeecad at Fiiq, shirkad u heellan inay fududeyso isticmaalka macluumaadka bulshada iyo xirfadeed ee dadka. Waad kala socon kartaa isaga iyo wararkii ugu dambeeyay iyo wixii ku soo kordha Pipl on Twitter.
Xagee Ahayd Inaad Dhigto Dadaalkaaga Suuqgeynta Sanadka 2020?
Haye, waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaad aad u faa'iido badan oo ku saabsan Suuqgeynta Emailka. Ku farax inaad aragto baloogyada kale ee ku saabsan adeegga lifaaqa emailka.